Hlola iMoscow, eRussia - World Tourism Portal
Hlola iMoscow, eRussia
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu eMoscow, eRussia
Okufanele ukwenze eMoscow, eRussia
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseMoscow
Bukela ividiyo mayelana neMoscow
Hlola iMoscow okuyidolobha elingaphezu kwe-870 elineminyaka engu-ubudala Russia. Idolobha eliwuphawu, lomhlaba wonke, iMoscow idlale indima enkulu ekuthuthukisweni kweRussia kanye nomhlaba. Kwabaningi, ukubona kwesakhiwo saseKremlin maphakathi nedolobha kusalayishwe uphawu nomlando. IMoscow yayiyinhloko-dolobha yezwe elaliyiSoviet Union futhi izibonakaliso zokuphila kwayo kwangaphambilini zisabonakala kakhulu. Noma kunjalo, kunokuningi eRussia nenhloko-dolobha yayo kunokukhumbula nje kwe-USSR. Amagugu ezakhiwo kusukela ngesikhathi soMbuso WaseRussia asenamachashaza kuyo yonke iMoscow, kuyilapho izimpawu zama-Tsars zanamuhla (noma okungenani abantu abanamazinga afanayo omnotho) zande. Eminyakeni yamuva nje leli dolobha liye lavuselelwa kabusha okukhulu futhi manje yidolobha lesimanje kakhulu laseYurophu elinesitayela saseRussia.
IMoscow yisikhungo sezimali nezepolitiki saseRussia kanye namazwe ayekade akha iSoviet Union ..
UMfula iMoskva ugoba phakathi kwedolobha ngezindawo eziningi zokuheha izivakashi osebeni olusenyakatho lomfula. Omunye umgwaqo omkhulu oMfula i-Yauza, ogeleza ungene eMoskva empumalanga yeKremlin.
Ubuningi besimo saseMoscow sichazwa yi-3 'Ring Roads' ezungeza leli dolobha kumabanga ahlukahlukene ukusuka kulesi sikhungo, cishe ngokulandela uhlaka lwezindonga ezazivimbezela iMoscow. I-Red Square neKremlin zakha yona kanye le ndawo, umgwaqo wendandatho ongaphakathi yiBoulevard Ring (I-Bulvarnoye Koltso), eyakhelwe kuma-1820s lapho kwakudalwa khona izindonga zangekhulu le-16th. Iqhamuka isuka ku-Christ the Lord Cathedral eningizimu-ntshonalanga maphakathi neMoscow, iye eYauza enkabeni mpumalanga maphakathi neMoscow.
Umgwaqo olandelayo oyindandatho, iGing Ring (I-Sadovoe Koltso), litholakala igama laso lokuthi abanini bomhlaba eduze komgwaqo ngezikhathi zamaTsarist babephoqelekile ukuthi balondoloze izingadi ukuze umgwaqo uthandeke. Ngezikhathi zeSoviet, umgwaqo wawunwetshiwe, futhi manje azikho izingadi lapho.
Umgwaqo Wesithathu Wendandatho, oqediwe ku-2004, awusetshenziswa kakhulu kubavakashi kepha uyimigwaqo esetshenziswa kakhulu ethwala kancane ithrafikhi yaseMoscow. Ilandela uhlaka lwe I-Kamer-Kollezhsky val, amasiko nomngcele wephasiphothi weMoscow phakathi kwe1742 ne1852. Umaphethelo wangaphandle weMoscow uchazwa kakhulu yiMetro Ring Road (eyaziwa kabanzi ngesifinyezo sayo: i-MKAD-Moskovskaya koltsevaya Automobil Naya Dorota), umgwaqo okuyi-108km ubude futhi uzungeze idolobha lonke.
IMoscow inesimo sezulu esinomswakama esinamakhaza amakhulu ebusika neqhwa elifudumele, imvula ngokulinganayo yasatshalaliswa unyaka wonke, ilinganisa i-707mm ngokwesilinganiso.
ngendiza iMoscow inezikhumulo zezindiza ezine.
Ngesitimela iMoscow iyindawo enkulu kunazo zonke yesitimela saseRussia, enamatheminali ayisishiyagalolunye nokuxhumana kuzo zonke izingxenye zeRussia kuze kube seYurophu nase-Asia. Ngenxa yesikhundla sayo, iziteshi zezitimela zaseMoscow zihlala zigcwele phama, futhi ukuzithela kuyinkinga, noma kunjalo ukuphoqelelwa ngamaphoyisa kuningi futhi nobugebengu obunobudlova abulindelekile. Ukuhamba ngesitimela kuyindlela ebaluleke kakhulu yokuhamba kokuhamba yendawo iningi labantu baseRussia.
Ngemoto. Ezinye izindawo zokungena eMoscow ngaphezulu kweRing Road nokungena edolobheni zifaka izithiyo zomgwaqo, lapho amaqembu emigwaqo ngezikhathi ezithile angamisa imoto, ikakhulukazi uma ingekho amapuleti eMoscow. Ungamiswa futhi ubuzwe imibuzo kodwa uzovunyelwa ukuthi uqhubeke uma unayo yonke imibhalo efanele.
IMoscow inezinto eziningi ezikhangayo. Amaphephandaba wolimi lwesiNgisi anjenge The Moscow Times, Element, Izindaba zaseMoscow futhi abanye bangasiza ukuzulazula bangene ekuthandeni nasezinsizakalweni zolimi lwesiNgisi. Kulula impela futhi kuphephile ukuhamba nokushayela yonke indawo eMoscow.
IMoscow ihlala iyisikhungo semfundo se Russia kanye ne-USSR yangaphambili. Kukhona izikhungo ze-222 zezemfundo ephakeme, kufaka phakathi amanyuvesi wombuso we-60 namanyuvesi we-90. Ezinye zalezi zinikezela ngezinhlelo eziningi ezibanzi, kepha iningi ligxile enkanjini ethile. Lokhu kubambe iqhaza kusukela ezinsukwini ze-USSR, lapho iSoviet-wide ibikhona “amanyuvesi” ambalwa kakhulu anezinhlelo eziyisisekelo zemfundo kanye nocwaningo (mathematics kanye mechanics, wonke amagatsha e-physics, chemistry, biology, njll.) kanye nenombolo enkulu “yezikhungo” ezikhethekile ezigxile kwisayensi esetshenzisiwe efana nezinkambu ezahlukene zobunjiniyela (ikakhulukazi eMoscow nase Saint Petersburg). IMoscow inikeza ezinye zezikole zebhizinisi / ukuphathwa okuhle kakhulu, isayensi, nezobuciko emhlabeni. IMoscow futhi iyindawo ethandwayo yabafundi bakwamanye amazwe yokufunda isiRussia.
Ukwemukelwa kwamakhadi esikweletu sekugcwele. Ama-ATM maningi, aboniswa ngesiNgisi futhi amukela amanethiwekhi amakhulu amakhadi afana neVisa / Plus ne-MasterCard / Cirrus. Amahhovisi okushintshana kwezimali maningi edolobheni, kodwa qiniseka ukubala ushintsho lwakho futhi uqaphele ukuthi amanani akhangisiwe kwesinye isikhathi awafaki ikhomishini engeziwe noma asebenza kuphela ekushintshanisweni okukhulu. Qiniseka ukuthi wephula amanothi akho we-RUB5,000 ne-RUB1,000 lapho ungakwazi khona kusukela abathengisi abancane, abathengisi basemgwaqweni kanye nomabhalane abaningi beMetro bavame ukubenqaba.
Izitolo ezinkulu ezinkulu zokuthenga zivame eduze neziteshi zikamasipala.
Izindawo zokudlela eMoscow zisukela ezitolo zokudla eziseduzane neziteshi zika-metro ziye ezindaweni zokudla ezisheshayo zesitayela se-canteen 'Stolovaya' kuya emaketeni okudla okusheshayo esiteji saseMelika kuya ezindaweni zokudlela ezihanjiswa kakhulu ezihlinzeka izivakashi ezindaweni zokudlela eziphezulu.
Izindawo zokudlela kanye namakhekhe athembisa "i-European and Caucasus cuisine" zivame ukunakekela izivakashi futhi zivame ukuba zimbi; funa indawo yokudlela ekhethekile esifundeni esisodwa esikhundleni (isiGeorgia, isiRussia, isiNtaliyane, isiFulentshi, njll.).
Izindawo zokudlela eziningi ezincane zinikeza okukhethekile kwasemini ngentengo enhle. Lawa macala asebenza kusuka ku-12: 00 kuya ku-15: 00 futhi afaka inkomishi yesobho noma i-appetizer, ingxenye encane yesitsha esiyinhloko sosuku, isinkwa nesiphuzo esingeyona notshwala.
Ukudla kobuhlanga okuyiqiniso kusuka emazweni aseCaucasus aseduze (Azzeranian, Georgia,
I-Armenia) kuvamile eMoscow. Ukudla kwaseJapan, kufaka phakathi i-sushi, ama-rolls, ama-tempura kanye nama-steakhouse athandwa kakhulu eMoscow. Ezinye izindlela zokudla zase-Asia kubandakanya iVietnam, isiThai, nesiShayina ziya ngokuya zanda.
IMoscow inamaketanga amaningana ekhefi elinekhofi enkulu. IMoscow nayo inokhetho oluhle lwama-saloon weti. Amathiphu wokungenela osezingeni eliphakeme njengeNewbyby, atholakala kabanzi kumakhofi, womabili emaphaketheni nasezikhululekile. Futhi izitolo eziningi zekhofi zikhonza ezisungulwe ephuzweni lekhofi laseMoscow elibizwa ngeRaf.
Ukucela ukungeza amanzi abilayo etiyeni owalile ngalo phambilini kuwumkhuba ongawemukeli amanye amakhofi, kodwa ngokuvamile kuyamukeleka.
Ngaphandle kwamanye amahhotela asezingeni eliphakeme, wonke amahhotela namahostela anikela nge-WiFi yamahhala futhi abaningi banamatheminali wekhompyutha. Cishe bonke bayawemukela amakhadi wesikweletu. Amahhotela namahostela kuvame ukuhlinzeka ngesimemo se-visa nokubhaliswa kwemali eyengeziwe.
IMoscow ijabulela inani eliphansi lobugebengu. Noma kunjalo, iMosco yidolobha elikhulu, ngakho-ke umqondo ojwayelekile kufanele usetshenziswe. Gwema izinsolo ezimnyama - sengathi ungathanda kwenye indawo.
Khumbula ukuthi zonke izidakamizwa zivinjelwe ngokuphelele. Noma yikuphi ubungako bezinto ezinqatshelwe kungaholela ejele.
Gcina iso kubona amakhethini kumetro; gwema ukuhamba emigwaqweni emnyama engenalutho ebusuku.
Amaphoyisa angafuna ukubona amaphepha akho ukuthi ahlole ukuthi ngabe ubhalisile ngaphakathi kwezinsuku zebhizinisi ze7 zokufika kwakho eMoscow. Khumbula njalo ukuthi uma uhlala ehhotela ubhaliswa ngokuzenzakalelayo futhi uzonikezwa iphepha lokuqinisekisa ngesikhathi sokungena, ngakho ungakhathazeki kuleli cala. Amaphoyisa ajwayele ukufuna abafudukayo abavela eCentral Asia futhi ngaphandle kokuthi ulingana nale phrofayili, cishe akunakubuzwa.
Ezinyangeni zasebusika, imigwaqo yaseMoscow ingashelela kakhulu. Thatha izicathulo ezimbili ze-grippe noma, okungcono kakhulu, amabhuzu (ukuvimbela ama-ankle asontekile) ne-raincoat engavunyelwe ngamanzi. Nakekela njengoba iziqandisi zeqhwa zivame ukuba nzima ukuzibona, noma ngabe zibonakala zihlanzwe noma zincibilikile. Ukugqoka izicathulo ezingewona ama-grippe kungaholela ekulimaleni.
IDowntown Moscow ikhanya ngokukhanya okukhulu, futhi imigwaqo eminingi ebanzi inezindlela zokuhamba zabahamba ngezinyawo ezingaphansi komhlaba. Nazo zikhanya kahle - ngakho-ke akufanele ukhathazeke ngokuthi uzokwehla ngaphakathi kwabo. Kodwa-ke, njengakweyiphi enye indawo, sebenzisa ukuqonda okujwayelekile, bese unakekela amaphakethe. Sebenzisa izindlela zokuwela abahamba ngezinyawo ukuwela umgwaqo, ngoba ukuthontelana kuyenzeka ngokuhlanya kaningi.
Qaphela imikhonyovu yamatekisi. Lokhu kujwayelekile, ikakhulukazi eduze kwezikhumulo zezindiza, iziteshi zesitimela, ukubona izivakashi, imigoqo kanye namakilabhu. Ungangeni emotweni ngaphandle kokuthi uvume ngamanani ngaphambili. UNGATHEMI ithemba ngamamitha wamatekisi, lokhu kungakuholela kwisibazi esikhulu
Amadolobha eduze neMoscow